Asar TaLine (အစားတစ်လိုင်း): ထိုင်းရိုးရာ အစားအစာတွေစုံလင်တဲ့ Tuk Tuk Thai Café
Asar TaLine (အစားတစ်လိုင်း)
ထိုင်းရိုးရာ အစားအစာတွေစုံလင်တဲ့ Tuk Tuk Thai Café
ရန်ကုန်မြို့က ထူးခြားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်လေး တစ်ခု အကြောင်း သတင်းပေးချင်ပါတယ်နော်….ဘိုကလေးဈေးလမ်း အလယ်ဘလောက်မှာဖွင့်ထားပြီး နာမည်က Tuk Tuk Thai Café လို့ခေါ်တယ်။ အရင်က Mexican အစားအစာတွေရတဲ့ Tin Tin Restaurant ကနေ Tuk Tuk Thai Café လို့ ပြောင်းဖွင့် လိုက်တာပါ။
ဒီဆိုင်လေးမှာတော့ ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း အစားအစာ တွေ စုံစုံလင်လင် ရရှိပါတယ်။ အရသာရှိတဲ့ ထိုင်းရိုးရာ Street Food တွေကို အခြေခံပြီး ဆန်းသစ်ဖန်တီးထားတဲ့ မီနူးအသစ်တွေကို လည်း စိတ်ဝင်စားဖွယ် တွေ့ရမှာပါ။
သောကြာ၊ စနေ ညနေတိုင်းမှာလည်း Cocktail Cart အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ ဆိုင်ရှေ့ လမ်းဘေးမှာ Cocktail Cart လေးထားရှိပြီး Cocktail ၊ ဝိုင်၊ ဘီယာ တစ်ခုခု သောက်ရင်း ထိုင်း Street Food တွေဖြစ်တဲ့ ဆာတေး၊ ထိုင်းစတိုင် ဝက်အူချောင်း၊ ဝက်ဂုတ်သားကင်သုပ် နဲ့ တအခြား သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့ Thai Street Food မျိုးစုံတို့ကို စားသုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးအနည်းငယ်များပေမယ့် သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီး အရသာရှိတာမို့ Dinner ကောင်းကောင်းစားချင်သူတွေ ဖြစ်ဖြစ်၊ အမြည်းကောင်းကောင်းနဲ့ ဘီယာသောက်ချင်သူတွေ အတွက် တကယ် အဆင်ပြေပါတယ်။
ဆိုင်လိပ်စာက - အမှတ်-၁၁၆-၁၁၈၊ ဘိုကလေးဈေးလမ်း (အလယ်ဘလောက်)
ဖုန်း - ၀၉ ၇၆၆ ၉၈၆ ၉၄၅၊ ၀၉ ၄၂၃ ၄၀၆ ၁၂၄
ဆိုင်ဖွင့်ချိန် - 11:00 AM – 11:00 PM
ထိုငျးရိုးရာ အစားအစာတှစေုံလငျတဲ့ Tuk Tuk Thai Café
ရနျကုနျမွို့က ထူးခွားတဲ့ စားသောကျဆိုငျလေး တဈခု အကွောငျး သတငျးပေးခငျြပါတယျနျော….ဘိုကလေးစြေးလမျး အလယျဘလောကျမှာဖှငျ့ထားပွီး နာမညျက Tuk Tuk Thai Café လို့ချေါတယျ။ အရငျက Mexican အစားအစာတှရေတဲ့ Tin Tin Restaurant ကနေ Tuk Tuk Thai Café လို့ ပွောငျးဖှငျ့ လိုကျတာပါ။
ဒီဆိုငျလေးမှာတော့ ထိုငျးနိုငျငံ မွောကျပိုငျး အစားအစာ တှေ စုံစုံလငျလငျ ရရှိပါတယျ။ အရသာရှိတဲ့ ထိုငျးရိုးရာ Street Food တှကေို အခွခေံပွီး ဆနျးသဈဖနျတီးထားတဲ့ မီနူးအသဈတှကေို လညျး စိတျဝငျစားဖှယျ တှရေ့မှာပါ။
သောကွာ၊ စနေ ညနတေိုငျးမှာလညျး Cocktail Cart အစီအစဉျရှိပါတယျ။ ဆိုငျရှေ့ လမျးဘေးမှာ Cocktail Cart လေးထားရှိပွီး Cocktail ၊ ဝိုငျ၊ ဘီယာ တဈခုခု သောကျရငျး ထိုငျး Street Food တှဖွေဈတဲ့ ဆာတေး၊ ထိုငျးစတိုငျ ဝကျအူခြောငျး၊ ဝကျဂုတျသားကငျသုပျ နဲ့ တအခွား သနျ့ရှငျးလတျဆတျတဲ့ Thai Street Food မြိုးစုံတို့ကို စားသုံးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
စြေးအနညျးငယျမြားပမေယျ့ သနျ့ရှငျးလတျဆတျပွီး အရသာရှိတာမို့ Dinner ကောငျးကောငျးစားခငျြသူတှေ ဖွဈဖွဈ၊ အမွညျးကောငျးကောငျးနဲ့ ဘီယာသောကျခငျြသူတှေ အတှကျ တကယျ အဆငျပွပေါတယျ။
ဆိုငျလိပျစာက - အမှတျ-၁၁၆-၁၁၈၊ ဘိုကလေးစြေးလမျး (အလယျဘလောကျ)
ဖုနျး - ၀၉ ရ၆၆ ၉၈၆ ၉၄၅၊ ၀၉ ၄၂၃ ၄၀၆ ၁၂၄
ဆိုငျဖှငျ့ခြိနျ - 11:00 AM – 11:00 PM
#AsarTaLine #FoodReview #FoodLover #Foodie #Yummy #Delicious #tuktuk #thaicafe #Yankin #Yangon #Myanmar #streetfood #Bogalayzay #food
Posted by AsarTaLine at 3:00 AM
အစားချည်းပဲတစ်လိုင်း သူငယ်ချင်းများ အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ် အစားအသောက်များအကြောင်း မျှဝေမယ်...
ထိုင်းရိုးရာ အစားအစာတွေစုံလင်တဲ့ Tuk Tuk Thai Café...
“မန္တလေးအရသာစစ်စစ်စားချင်သူတွေအတွက် ရန်ကင်းက နန်းတေ...
Amazing!!! တကယ်တန်တဲ့ Seafood တွေရတဲ့ Green House
စမ်းချောင်းထဲက နာမည်ကြီး ကွေ့တီယို
Shopping ထွက်ရင်း ဗိုက်ဆာတဲ့အခါ ဆွဲလို့ကောင်းတဲ့ ထ...